मङ्गलबार, चैत्र १९ २०७५ प्रकाशित
आइतबार राति सवा आठ बजे सबै खाना खाएर सुत्ने तरखरमा थिए । कोहीस् टिभी हेर्दै थिए कोही सुत्ने योजननामा थिए कोही ढिलो गरी खाना खाँदै थिए । राति एकैचोटी गाउँमा ठूलो आवाज आयो सबैको ध्यान आकाशतिर मात्रै के गएको थियो । एकैछिनमा गाउँमा ठूलो कोलाहार परिणत भयो ।
बाराको भलुही गाउँको कथा हो यो । यो झट्ट सूनदा कुनै फिल्मको कथानी जस्तो लागेपनि सत्य कथा नै थियो यो । निकै शान्त र सुनसान रहेको त्यो गाउँ एकैछिनमा कोलाहरमा परिणत भयो अनि घरभित्रै मानिस पुरिए ।
उद्दार गर्ने अवस्था पनि भएन स्थानीय राजेश रौनियारले बताए । बाराको प्रसौनाको भलही गाउँमा बसेभन्दा बढी हावाले क्षमति पु¥याएको छ । त्यही गाउँमा मात्रै मृत्यु हुनेको संख्या बढी देखिएको बाराका सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै बारामा आइतबार राति आएको हावाहुरीबाट सबैभन्दा बढी क्षति फेटा गाउँपालिका ६ पुरइनियाँमा भएको छ । उक्त गाउँमा एकै परिवारका ४ जनासहित ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
इजहार मिया अंसारीकी श्रीमती मीना खातुन, बुहारी सतिमा खातुन र उनका दुई नातीनी सम्चिदा खातुन र रुक्सार खातुनको मृत्यु भएको हो । यस गाउँमा अहिले सुरक्षाकर्मीहरु भग्नावशेष पन्छाइरहेका छन् । आइतबार साँझ वर्षासँगै आएको हावाहुरीले बारा र पर्सामा ज्यान गुमाउनेको संख्या २७ पुगेको छ । ५०० भन्दा बढी घाइते छन् ।
घाइतेको संख्या बढेपछि अस्पताल भरिएको र उपचारमा कठिनाइ भएको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । बिरामीको चापले रगतसमेत अभाव भएको छ ।तराईका धेरै जिल्लाहरु हावाहुरीको चपेटामा परे पनि अन्य जिल्लाबाट भने क्षतिको खबर प्राप्त भएको छैन ।
मङ्गलबार, चैत्र १९ २०७५
दोस्रो सहिद स्मृति मकवानपुर गोल्डकपको उपाधी मकवानपुर ११ को पोल्टामा
शुक्रबार​, चैत्र १५ २०७५
महेन्द्र किरण मा. वि. बसामाडी काण्ड : प्र.अ गौतम र सह-प्रअ. माथि गम्भिर आरोप - प्र.अ गौतम यसो भन्छिन्
चलचित्र कल्चर...चैत्र २९ गते हेटौडामा प्रर्दशन हुँदै
बिहीबार, चैत्र १४ २०७५
बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएपछि बागमती गाउँपालिकाका महिला खुशी
कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोक्तानले किन गरे प्रधानमन्त्रीलाई ब्याङ्ग्य